कांग्रेस समावेशी पार्टी हो, यसको नेतृत्व समावेशी हुनुपर्छ
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस अर्घाखाँची​का सभापति विष्णुप्रसाद खनाल​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
नेपाली कांग्रेस सभापति
विष्णुप्रसाद खनाल, अर्घाखाँची
नेपाली कांग्रेस अरु राजनीतिक पार्टीको पनि ‘माउ पार्टी’ हो । त्यसकारण पनि यसका गतिविधि र व्यवहार लोकतन्त्र अनुकूल हुनु जरुरी छ । कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत तरिकाले चल्नुपर्छ । अन्योलबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अधिवेशनको कार्यतालिका अन्तिम समयमा आएर सार्वजनिक गरेको छ ।
देशभरका सबै सभापतिहरुको चिन्ता र चासो यतिबेला क्रियाशील सदस्यको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्यो भन्नेमा छ । त्यसपछि विधिवत् तरिकाले विभिन्न तहगत कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा आएका सदस्यहरु तोकिसकेपछि अधिवेशन समयमै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार स्पष्ट छ । अधिवेशन गरिसकेपछि त्यहाँ विचारको बारेमा वा नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा अधिवेशन हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
स्वाभाविक रुपमा हरेक महाधिवेशनमा युवा, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर समावेशी आवाज उठ्ने गर्छ । नेपाली कांग्रेस समावेशी पार्टी हो यहाँ समावेशी आवाज उठ्नुपर्छ र यसको सुनुवाइ पनि हुनुपर्छ । यो पार्टीमा पुराना र नयाँ पुस्ता दुवै मिलेर नेतृत्व बन्नुपर्छ । समग्रमा युवा र पुराना नेताहरुको सम्मिश्रणबाट पार्टीलाई अघि बढाउनेगरी सबैले सोच्नुपर्छ । यो काममा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु योग्य देखिनुपर्छ र नेतृत्व चयनमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।
पार्टीमा परिवारवाद हाबी
कांग्रेस पार्टीमा परिवारवाद हाबी भयो पनि भन्ने गरिन्छ । यो पार्टी परिवारवादमा जानु त पटक्कै हुँदैन, पार्टी जबर्जस्ती कुनै पनि वादमा जानुहुँदैन भनेर आवाज उठिरहेका पनि छन् । हामी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मान्ने पार्टी भएकाले लोकतान्त्रिक संवाद र प्रक्रियामा जानुपर्छ । आमकांग्रेसी नेता–कार्यकर्ताको चासो पनि यसैमा छ । परिवारवादले कतिपय अवस्थामा पार्टीलाई घाटा पारेको छ ।
केन्द्रीय नेताहरुको वरिपरि रहेर मात्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने, उनीहरुलाई नै पार्टीको सर्वेसर्वा ठान्ने, जिल्लामा काम गरेकाहरुलाई नदेख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । यी सबै कुराहरुलाई हेरेर कांग्रेसको यो अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पनन गराउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।
हामी क्रियाशील सदस्यको विषयमा सुरुमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा अरु दलका साथीहरु पनि प्रवेश गर्नुभएको छ । उहाँहरुले पनि पार्टीको क्रियाशीलता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । कुनै पनि सभापतिले यसमा विमति राख्नुभएको सुनिएको पनि छैन । जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका, प्रक्रिया पुगेर केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेका सदस्यहरु जस्ताको तस्तै स्वीकृत हुनुपर्छ ।
त्यस्तो नभएर जिल्लाबाट आएका नामहरु हटाउने र काठमाडौंबाट आफ्नो अनुकूलमा मान्छेहरु थप्ने काम भयो भने समस्या आउँछ । त्यसप्रति जिल्ला सभापतिहरुको विरोध भएको हो । त्यस्तो काम त पटक्कै हुनु हुँदैन । वैधानिक रुपमा पार्टी प्रवेश गरेका साथीहरुलाई नेतृत्वले बुझेर उचित स्थान दिनुपर्छ ।
कांग्रेस यतिबेला थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चुनौती र अवसर एकसाथ प्राप्त भएको छ । जनताको जीवनस्तरका कुरा एकातिर छन् भने अर्कोतिर कोभिडदेखि बाढी–पहिरोसम्मका विपत्तिहरु छन् । तर, यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि हामीलाई अवसर पनि छ ।
यतिबेला कांग्रेसको हातमा सरकार छ । कम्युनिस्ट पार्टी विफल भएको छ । यो सरकारलाई टिकाएर र काम द्रुत गतिमा अघि बढाएर लानुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ । यो अवसरलाई व्यवस्थित गराउँदै, पार्टी र सरकारलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
प्रकाशित मिति : भदौ ८, २०७८ मंगलबार २०:५८:८,